PSJTV | द्वारिकलाल नेकपाले डामेर छाडेको साँढे
द्वारिकलाल नेकपाले डामेर छाडेको साँढे
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसकी सांसद बिन्दिया कार्कीले इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकलाल चौधरी नेकपाले डामेर छाडेको साँढे भएको संज्ञा दिएकी छिन् ।
शुक्रबारको प्रदेशसभाको बैठकमा बोल्दै कांग्रेसकी सांसद कार्कीले महिलाको कार्यक्रममा महिलाप्रति दिएको अभिव्यक्ति निन्दनीय भएको बताएकी हुन् । उनले भनिन्, ‘‘के इटहरीको मेयर नेकपाले डामेर छाडेको साँढे हो ? जथाभावी बोलेर महिलाको चरित्र हत्या गर्ने ?’’
साथै उनले मेयर चौधरीले महिलाका विषयमा सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिप्रति प्रदेश १ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् ।
शून्य समयमा बोल्दै सांसद कार्कीले मेयर द्वारिकलाल चौधरीले पहिलो पत्रकारमाथि आक्रमण गरेको र केही कारवाही नभएपछि फेरि आँट पाएर महिलामाथि अभद्र शब्द प्रयोग गरेको बताइन् ।
‘‘पत्रकारको कठालो समाएर जथाभावी बोलेर गुन्डागर्दीमा उत्रिएका थिए । त्यो हेर्दाहेर्दै सरकारले कुनै किसिमको भूमिका निर्वाह गरेन ।’ उनले भनिन्, ‘फेरि आँट पाएर महिलाकै चरित्र हत्या गर्ने काम गरे । त्यो शब्द म यहाँ प्रदेशसभामा उच्चारण गर्न सक्तिनँ । मैले अरुको मुखबाट अहिलेसम्म सुनेको छुइनँ, तर मेयरले बोले । सरकार किन हो चुप ?’
‘डामेर छाडेको साँढे हो मेयर चौधरी ? नेकपामा आउने युवक युवतीले अब यही हेरेर आउने हो ? यो पार्टीमा आउँदा जे बोल्न र गर्न पाइन्छ भन्ने भावनाको विकास भएको छ । यसको जिम्मा नेकपाले लिनुपर्छ ।’ उनले थप्दै भनिन्, ‘नत्र के गर्ने हो ? कि भन्नुपर्यो हाम्रो नीति त्यही हो । कि त मेयर चौधरीलाई पागलखानामा भर्ती गर्नुपर्यो । नत्र कठालोमा समाएर महिलाले घिसार्नुपर्छ ।’’
सांसद कार्कीले मेयरले जे गरे पनि जे बोलेपनि सत्तापक्षले केही नगरेकोले नै एउटै शब्द २९ पटक दोहोर्याएर महिलाको विषयमा जथाभावाी बोलेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा मेयर चौधरीले महिलालाई ‘रन्डी’ भन्ने शब्द प्रयोग गर्दै ‘रन्डीकै कारण पिल्स, लिपिस्टिक र कन्डम’ बिक्ने गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले ‘रन्डी जिन्दावाद’ भन्ने नारा पनि लगाएका थिए ।